Eriri Laser akara Machine, CO2 Laser akara Machine - Boln
Wide Mpaghara Laser Marking Machine BL-WA30A
Akara teknụzụ metụtara ụlọ ọrụ akụkụ ụgbọ ala, belụsọ maka akara akara ọnụọgụ, nkọwa, nke nwekwara ike ijikwa ndị na-eweta ngwaahịa ma nweta ikike ngwaahịa, wee jiri ya na ngwaahịa ndị adịgboroja na ndị dị ala. Njikwa ndị na-eweta ngwaahịa na-egosipụtakarị akara akara usoro, aha na logos na akụkụ akpaaka, wee jikọta ya na nchekwa data, nyochaa ọnụọgụ na ọtụtụ dịgasị iche iche, na-emecha nweta ọrụ nke ịjụ na nyochaa njikwa ngwaahịa na ndị na-ere ahịa.
Kọmputa na semiconductor
Anyị marking igwe nwere ike akara nkọwapụta, Oghere Usoro ọgụgụ na ogbe nọmba na ngwaahịa elu, eji na electronic mmiri, transformer, electronic njikọ, circuit iba, plastic, metal, batrị, doro anya plastik, keyboard, obere engine na mgba ọkụ. Ọtụtụ ihe dị mkpa na bọọdụ okirikiri chọrọ ka akara ma zoo na ụlọ ọrụ eletrọniki, na-edekarị akara akụkụ, oge mmepụta na ụbọchị nkwakọba ihe. Kasị emepụta na-eji silk ihuenyo ebi akwụkwọ ma ọ bụ labeling, na ụfọdụ na-eji laser marking igwe.
Ejirila teknụzụ laser na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa. Ngwa akụrụngwa laser nwere ike itinye akara ụbọchị mmepụta, ụbọchị mmebi, ọnụọgụ ogbe, akara, koodu mmanya na mmiri mmiri na nkwakọ ngwaahịa siri ike. Ka ọ dị ugbu a, ọ bara uru maka ọtụtụ ihe nkwakọ ngwaahịa, dị ka igbe katọn, karama PET, karama iko, ihe nkiri mejupụtara na igbe tin. Enwere ike iji akụrụngwa laser na ụtaba, ọ bụghị naanị maka ịchọpụta ozi gbasara ngwaahịa sịga (dịka sịga Carton ma ọ bụ sịga sịga sitere na ụlọ ọrụ ụtaba), kamakwa maka akara akara dị ka mgbochi adịgboroja, njikwa ahịa na nsụgharị logistic.
Ejirila teknụzụ laser na ụlọ ọrụ onyinye. Dị ka elu nhazi akụrụngwa na e ji mara nke ngwangwa ọsọ na elu arụmọrụ maka kọntaktị-erughị nhazi, laser marking enweghị ihe ọ bụla ihe n'iyi na-akanye ndịna bụ ezi na ndị mara mma, mgbe eyi. Na mgbakwunye, usoro akara a na-agbanwe agbanwe, ọ bụ naanị ntinye ederede na eserese na ngwanrọ. Igwe anyị nwere ike igosi mmetụta ịchọrọ ma zute mkpa ahaziri nke ndị ahịa anyị.